Mhedzisiro yekuunganidza nekuvandudza B2B Dhata rekushambadzira | Martech Zone
Pandakatanga rwendo rwangu rwemakambani ndichishandisa kuvandudza kunoramba kuripo, kumwe kutsvaga kwaienderana nekuvandudza chero maitiro kwaive kusashanda - uye nemukana wakatevera - mukubata. Makumi emakore gare gare uye ini ndoona kuti izvi ndezvechokwadi kunyange nesangano redu.
Mumwe muenzaniso ndeye apo vatengi vedu vanowana mari mukati memapoka avo. Kana mutongi-sarudzo achinja, kazhinji kacho hukama nemutengi huri panjodzi. Hazvina basa kuti tiri kuita zvakanaka sei; ingori nyaya yechokwadi. Munhu mutsva ane hunyanzvi, maitiro uye - kazhinji - boka remakambani anotsigira akavabatsira munguva yakapfuura uye angangovabatsira mune ramangwana.
Kana shanduko ikaitika muhutungamiriri, mabhajeti nemikana zvinotevera. Mumwe muenzaniso - isu kazhinji tinozviwana tichishandira vechidiki kushambadzira tekinoroji kutanga izvo zvakave nekuwanda kwemari yekudyara. Shanduko iri kwese kwese, zvakadaro! Muizvi infographic kubva kuSalesforce, ivo vanoona kuti yega hafu yeawa 120 kero dzebhizinesi dzinochinja, makumi manomwe nenhamba dzenhare dzinochinja, maECO makumi maviri vanosiya mabasa uye mabhizimusi matsva makumi matatu akaumbwa. Kuve nekuwana dhata seichi chinhu chakakosha kukura bhizinesi rangu pamwe neako.
Salesforce Data.com inogona kukubatsira mukuvandudza data rako kuitira kuti iwe ugone kugadzira maprofiles akazara anoita kuti kuve nehunhu, ikubatsire kufumura ruzivo kuburikidza nezvikamu zviri nani uye kukoshesa uye nekuvandudza kushambadzira uye kuenderana kwekutengesa pane mameseji uye chibatiso.
Vatengesi vemazuva ano vanofanirwa kusanganisa kugona uye simba rekutaura nyaya pamwe nekuongorora uye nzira dzinotungamirwa nedata. Dhata iri nani inogonesa vashambadzi kuvaka mishandirapamwe yakanangwa uye kuendesa izvo zvirimo kumatarisiro. Nekuunganidza uye kuongorora data rekutungamira, vashambadzi vanokwanisa kupfuudza nzwisiso yakakwana yevatengi kuchikwata chavo chekutengesa, kuona kuti munhu wese aripo papeji rimwe chete mukugadzira ruzivo rwevatengi rwakajairwa. Kim Honjo, Mutengesi
Dhata inopa mukana unoshamisa kumabhizinesi sangu. Salesforce ine e-bhuku nyowani, Maitiro eData-Centric Matimu Ekutyaira Bhizinesi Kubudirira, kuti mabhizinesi adzidze kuti kutengesa, kushambadzira, uye maCRM manejimendi zvikwata zvinogona kuvaka rakabudirira data-centric sangano, pakupedzisira kutyaira bhizinesi kubudirira.
Tags: b2bb2b data rekubatab2b dhatadata rekutauriranaDatakukwana kwe datadata datadata yekutengesaKugonesa Kugonesasalesforce
Yashi Vhidhiyo Kushambadzira neGeographic Dunhu